सभापति देउवाको सम्मानजनक बहिर्गमन नै कांग्रेसको सहज अवतरण!, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै कमजोर अवस्थामा उभिएको छ। कांग्रेसभित्र यतिबेला गुटको राजनीति मौलाएको छ। सभापतिले पार्टीलाई भन्दा बढी आफ्नो गुटलाई काखी च्यापेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको पदाधिकारीको बैठकमा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ।
चार वर्ष कार्यकाल भएको एउटा निर्वाचित कार्यसमितिले तीन वर्ष पूरा गरेर चार वर्ष पूरा हुन केही महिना बाँकी हुँदा सभापतिले विभाग गठन गर्छु भन्नु कति जायज हो? यद्यपी सभापतिलाई एकवर्ष कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ। तर, आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा विभाग गठन गर्छु भन्दा त्यो विभागमा बस्ने सदस्यहरुले कसरी र के काम गर्लान्? उनीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र कसरी तय गर्ने, कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको पहिचान र गर्नुपर्ने काम कसरी गर्ने ? भनेर गृहकार्य गर्दा गर्दै उनीहरुको समय समाप्त भइसक्छ।
एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको कार्यसमितिले बनाएको विभाग अर्को महाधिवेशनबाट निर्वाचन कार्यसमिति आउने बेलामा स्वतः समाप्त हुने र उसले फेरि विभाग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा बनाइएका विभाग र पाएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेले कसरी काम गर्न सक्छन्? परिस्थितिलाई बुझेर अहिले सभापतिले गर्नुभएको प्रस्तावको विश्लेषण गर्ने हो भने यो आफूभित्रका विवाद समाधान गर्न नसक्दा अलमल्याउने विषयकालागि मात्रै गरिएको प्रस्ताव हो भन्न गाह्रो छैन।
सभापति देउवाले आम कार्यकर्ताको भावना बुझेर युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफू सम्मानित अभिभावक भएर बस्नुपर्छ।
यसले पार्टी संगठनलाई उर्जा दिने, बलियो बनाउने र समस्याको समाधान गर्दैन। यो केवल सभापतिले समयमै गर्नुपर्ने काम नगरेको भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई देखाउनको लागि मात्र हो । सभापतिले अहिले आलोचकलाई चुप गराउन र झरा टार्न मात्र विभाग गठनको प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ।
वर्तमान सभापतिले एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा पाउनुपर्ने सबै कुरा प्राप्त गर्नु भएको छ। अब उहाँले सम्मानित र गरिमामय हिसावले अभिभावकको रुपमा बस्नुपर्छ। त्यसो हुँदा उहाँको सम्मान झन बढ्छ। अब उहाँले पद ओगटेर कांग्रेसलाई गतिविधि शून्य बनाउने र कम्युनिष्टलाई मुलुकमा रजाइँ गर्न छोड्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।
कम्तिमा पनि कांग्रेसलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, जनताले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा राखिदिएपछि त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने संविधान सम्मत भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने कांग्रेस हुन पनि पाओस्। त्यसैले अब सभापति देउवाले आम कार्यकर्ताको भावना बुझेर युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफू सम्मानित अभिभावक भएर बस्नुपर्छ।
कांग्रेसभित्र विचार मन्थन हुने, विचारमा बादविवाद गर्नुसम्म ठिक हो, तर द्वन्द्व झगडा गर्नु उचित होइन। कांग्रेस मासबेस पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक निर्विकल्प शक्ति हो। कांग्रेस मुलुक जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मन जितिसकेको राजनीतिक शक्ति हो। त्यस्तो शक्तिलाई नेताविहीन र नेतृत्वविहीन नबनाऔं। जनताका माझमा गएर दुख सुख साट्ने, जनता कार्यकर्ताले भर गर्न र विश्वास गर्न सक्ने, कांग्रेसको निष्ठा र सिद्धान्तमा अडिग रहन सक्ने व्यक्तिको हुन सक्छ? त्यस्तो व्यक्तिको खोजी गरेर नेतृत्व दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
कांग्रेस स्थापना हुँदा देखि लिएको नीति र सिद्धान्तलाई लिएर कार्यकर्ताको मन जित्ने नेता को हुन सक्छ? कसैको चर्को आलोचना गरेरमात्रै पनि नेता नहुन सक्छन्। ठूला भाषण र सपना देखाएर मात्रै पनि नेता नहुन सक्छन्।
नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै नेताले पनि विश्वास गर्न सक्ने, संगठनको मर्म र भावनालाई बुझेर नेतृत्व दिने सक्ने, जनताको सुख दुखमा साथ दिन सक्ने र जनताले भरोसा गर्न सक्ने, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिस्थितिको मूल्याकंन गर्न सक्ने र सही निर्णय गर्न सक्ने, भोलि जनताले दिएको विश्वास र मतका आधारमा सरकारको नेतृत्व आइपर्दा सम्हाल्न र हाँक्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति आज कांग्रेसको नेतृत्वमा आवश्यक छ।
संगठित भएर नेतृत्व दिने निसंकोच सबैलाई समेट्न सकिने व्यक्ति को हुन सक्छन् भने वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला। शायद कसैले पनि संकोच नमानी उहाँमुनि समेटिन तयार हुन्छन्। समय र परिस्थितिको माग पनि त्यही होला
हुन त हाम्रो हिन्दूको संस्कार र सांसारिक राजनीतिक परिस्थितिको अध्ययन गर्दा र दक्षिण एसियाको राजनीतिक संस्कार हेर्दा पारिवारिक पृष्ठभूमि र लिगेसी पनि जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ। अब संगठित भएर नेतृत्व दिने निसंकोच सबैलाई समेट्न सकिने व्यक्ति को हुन सक्छन् भने वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला। शायद कसैले पनि संकोच नमानी उहाँमुनि समेटिन तयार हुन्छन्। समय र परिस्थितिको माग पनि त्यही होला।
तर यसो भन्दै गर्दा म होइन, म तयार भइसकेको छैन, म भन्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा फलानो उपयुक्त हो म उहाँलाई समर्थन र साथ दिन तयार छु भन्दा लोकप्रियता र कुशल संगठनकर्ताको हिसाबले डा. शेखर कोइराला कम देखिनु हुन्न। पक्कै पनि डा. शशांकको सहयोग लिएर र पाएर उहाँ पनि तयार हुन सक्नुहुन्छ।
कांग्रेसमा अब शेरबहादुर देउवाले अर्को मानिस अगाडि सार्न र अर्को मानिसले नेतृत्व लिन र आम कार्यकर्तालाई परिवर्तनको महशुस गराउन र आशा जगाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ। त्यसतर्फ सोच्ने र काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा कार्यकाल सकिन लागेको समापतिले कार्य सम्पादन समिति र विभाग गठन गर्ने भनेर अलमल्याउने काम गर्नु हुँदैन। अब कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ।